The Legend of Monster ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel February 17, 2017
အခုတခေါက်ကတော့ သာမန် တင်ဆက်ပေးနေကြ Drama / Romance တွေမျိုး မဟုတ်ပဲ .... Viki မှာ 9.9/10 တောင် ရရှိထားတဲ့ Action / Fantasy ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ ... ( ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာကတော့ rating ကိုပဲ ရှိုးတော့နော် )
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - ခရစ်နှစ် 3018 မှာ လူသားတွေ နဲ့ မိစ္ဆာတွေ ရောနှောပြီး နေထိုင်ကြပါတယ် ... မိစ္ဆာတွေက လူသားတွေကို ဖမ်းစားပြီး လူသားအသွင်ယူကာ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ရှင်သန်နေပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ မတူညီတဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်ရှိပြီး မျိူးနွယ်မတူတဲ့ Vampire , Shadow Demon နဲ့ Earth Wolf ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကတော့ မိစ္ဆာတွေကလဲ လူသားတွေနဲ့အတူ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ် ... ကျန်တဲ့ မိစ္ဆာတွေကလဲ လူသားတွေဆိုတာ သူတို့အတွက် အစာလို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ် ... ဒီလိုနဲ့ပဲ မတူညီတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ကိုင်ဆွဲပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ကြကာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖော်ဆောင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ရဲ့ ကြိုးစားပုံလေးပေါ့ ... ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ effect တွေနဲ့အတူ asian ကားတွေထဲမှာမှ ရှားရှားပါးပါး type လေးပါ ...
Cast တွေအဖြစ်ကတော့ Vampire အဖြစ် Zheng Ya Wen , Shadow Demon အဖြစ် Yang Shi Han , Earth Wolf အဖြစ် Zhang Vin တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
အပိုင်းပေါင်း ၂၀ ပါရှိပြီး အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တပတ်ကို4ပိုင်း ပုံမှန်တင်ဆက်သွားပါ့မယ်
( Exam နီးနေပြီဆိုတော့ တရက် နှစ်ရက် နောက်ကျရင် နည်းနည်း သည်းခံပေးကြပါနော် )
Drama / Romance တွေကို ရိုးအီနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ရော , Action/Fantasy ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြိုကနှစ်သက်တတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ရော ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ အာမခံလိုက်ပါတယ် ...
Translator : Anonymous X
Action China Fantasy
Labels: Action China Fantasy
Theint March 21, 2017 at 12:04 AM
Sai htun htun min min March 24, 2017 at 1:34 AM
plz next9to end , Thanks u for ur kindness
Mee Mee April 5, 2017 at 10:42 PM
Kyaw Zaya April 22, 2017 at 4:13 PM
What happen,Tell me please!where's next episodes?
Moe sat May 13, 2017 at 8:16 AM
ROD HTAW June 16, 2017 at 1:02 PM
Sai htun htun min min June 22, 2017 at 3:29 AM
htain linn July 16, 2017 at 8:57 PM
Sai htun htun min min July 26, 2017 at 1:56 AM
plz update for this series
Htet Arkar August 12, 2017 at 12:53 PM
သူများတွေ တော်ု ၁၈ ထိကြည့်ပြီးပီ မြန်မြန်တင်းပေးပါဗျို့
Jackson September 20, 2017 at 1:12 AM